Shwesagar & MgTrojan Myanmar E Book | Myanmar Blog
Mg Trojan ရဲ့ Site ကနေလာပြီး Comment ပေးသွားပါတယ်။ သူတို့သိတဲ့ E Book လေးတွေပါ။
ကိုသူရနဲ့ MgTrojan ကိုကျေးဇူးပါ။
မြန်မာ e-Books များ မှာထပ်ပေါင်းထည့်ပေးထားပါတယ်။
အကြည်တော် အာဒမ်၏ ဆာတေး
အကြည်တော် အသည်းကွဲ ၂၄ နာရီ
အကြည်တော် အိမ်မက်အပိုဒ်ခွဲ ၉
ဒဂုန်ရွှေမျှား စိတ်နှင့် …
အခုအောက်က အီဘွတ်တွေကတော့ www.shweone.wordpress.com က အီးဘွတ်တွေပါ။
Right Click နှိပ်ပြီး Save လုပ်ပြီးဖွင့်ပါ။ ပိုမိုမြန်ဆန် လွယ်ကူပါသည်။
စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၁ (ဇင်သန်.)
စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၂ (ဇင်သန်.)
စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၃ (ဇင်သန်.)
တန်းခူးလေနှင့်လျော့တော့သည် (တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်)
ဖြစ်တည်ခြင်း ပဓါန၀ါဒနှင့် လူသားပဓါန၀ါဒ (ဆန်းလွင်)
ကိုယ့်လက်နဲ. ဖမ်းမိတဲ့နဂါးငွေ.တန်း (တာရာမင်းဝေ)
အထဲသို.၀င်လော့ ဘာကြောင့်ရပ်နေသနည်း (တာရာမင်းဝေ)
ရွှေဘုံသာ လမ်းပေါ်မှာ (ဦးလှဝင်း)
တာတေ စနေသား (ဦးနု)
ယောနသံ ဇင်ယော် (ဦးဘသန်း)
ရှေးဘ၀ နောက်ဘ၀ ဗုဒ္ဓ မဝေဖန် နှင့် ဓမ္မစာစုများ (၀င်းသိန်းဦး)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁) အပိုင်း က (ဦးနု)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁) အပိုင်း ခ (ဦးနု)
အဟိတ်- – – ၀တ္တုဇာတ်လမ်းများ (သိပ္ပံမောင်ဝ)
ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ. ရင်ခုံသံ (၀င်းဝင်းမြင့်)
ဆားလင်းနှင်းမောင်နှင့် ဘမျိုးဘိုးတူ ဘယ်သန်ဘမှန် ပထမပိုင်း (မင်းသိင်္ခ)
ဆားလင်းနှင်းမောင်နှင့် ဘမျိုးဘိုးတူ ဘယ်သန်ဘမှန် ဇာတ်သိမ်း (မင်းသိင်္ခ)
မ” တတ်ပါ့“ (မင်းသိင်္ခ)
ဖရန်.(ဇ)ကာ(ဖ)ကာ၏ စာ (မြင့်သန်း)
ပြောရင်းပြောနေမည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (နန္ဒာသိန်းဇံ)
အိုင်ဒီယာ အက်ဆေးများ (နေ၀င်းမြင့်)
ပန်းပွင့် ခရေနှင့်အခြားဝတ္တျုတိုများ (မစန္ဒာ)
အစီရ၀တီ ကုဏ္ဍလကေသာ (ချစ်ဦးညို)
မှ တစ်ဆင့် (မိုးမိုးအင်းလျား)
ဝေဒနာ ကြာနီပွင့် (မိုးမိုးအင်းလျား)
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ လွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓာတ်မျိုးစေ့ချခဲ့သူ (ဦးဘရင်)
~ by Ko Ko Ye` on January 26, 2009.
3 Responses to “Shwesagar & MgTrojan Myanmar E Book”
ဖိုးတာတေ said this on	March 23, 2009 at 12:46 pm | Reply
Myo Thant Kyaw said this on	August 22, 2009 at 3:29 pm | Reply
All myanmr should read all of Thein Pae Myint’ book. Pls, try to launch.
Myo Thant Kyaw said this on	August 22, 2009 at 3:31 pm | Reply